मेसीले जन्मदिनमा के उपहार पाए ? - Everest Dainik - News from Nepal
मेसीले जन्मदिनमा के उपहार पाए ?
२०७५, ११ असार सोमबार
एजेन्सी । अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेसीले आइतबार आफ्नो ३१औं जन्मदिन मनाएका छन्। सन् १९८७ को जुन २४ मा जन्मिएका मेसी आइतबार ३१ वर्ष पूरा भएर ३२ मा लागेका हुन्।
यसैबीच मस्कोमा उनलाई सरप्राइज गिफ्ट पाएका छन्। विश्कपका लागि मस्को आएका उनलाई चकलेट तथा केक बनाउने पेशामा रहेकाले मेसीको जन्मदिनमा उनकै प्रतिमाको केक बनाएर उपहार दिएका छन्।
याे पनि पढ्नुस मेसीलाई हराउदै रोनाल्डोले जिते उत्कृष्ट फरवार्डको उपाधि
उनीहरूले मेसीलाई उपहार दिनकै लागि सात दिन लगाएर मेसीजस्तै चकलेट केक तयार पारेका हुन्। मस्कोका पाँचजना केक निर्माताले बनाएको उक्त मेसी केकको तौल ६० किलो छ।